Xiaomi Mi A2: tafaporitsaka ny daty sy ny daty famoahana | Androidsis
Tamin'ny taon-dasa Xiaomi dia nanangana ny Xiaomi Mi A1, findainy voalohany miaraka amin'ny Android One ho toy ny rafitra miasa. Ny maodely dia nahazo fandraisana tsara teo amin'ny tsena, izany no antony efa nanomanan'ny marika ny mpandimby azy. Momba ny Xiaomi Mi A2, izay antenaina ho avy tsy ho ela ary mifototra amin'ny Xiaomi Mi 6X.
Midika izany fa ny famaritana ny Xiaomi Mi A2 dia hitovy amin'ny an'ny Mi 6XAfa-tsy ny rafitra fiasa, satria hampiasa Android One ity modely ity. Betsaka ny vinavina momba ny fandefasana azy, saingy noho ny fivoahana dia efa fantatsika hoe rahoviana no ho tonga izy io ary ohatrinona ny vidiny.
Tamin'ity faran'ny herinandro ity no namoaka ny tahirin-kevitra rehetra momba ny telefaona tamina magazay an-tserasera. Ny fepetra arahana, izay mitovy amin'ny Mi 6x, ny vidin'ny telefaona sy ny daty famoahana azy. Ka efa fantatsika daholo ny angona mahaliana amin'ity lafiny ity.
Raha ny vidiny, ity Xiaomi Mi A2 ity dia ho somary lafo kokoa noho ilay teo alohany. Hita fa amin'ny tranonkala dia mampiseho a ny vidin'ny 359 franc Swiss, izay eo amin'ny fifanakalozana dia manodidina ny 320 euro. Ny maodely tamin'ny taon-dasa dia nisy vidiny 200 sy 225 euro teny an-tsena. Ka fiakarana miavaka no miandry antsika. Ianao dia afaka jereo eto ny fivarotana an-tserasera.
Manana angon-drakitra momba ny daty famoahana azy koa izahay. Tombantombana fa ho tonga amin'ny fahavaratra ny Xiaomi Mi A2, ary toa marina ireo fivoahana ireo. Satria ny datin'ny famoahana dia kasaina hatao amin'ny 8 Aogositra. Kely ihany ny fiandrasana amin'io lafiny io.
Ny vidiny farany an'ny Xiaomi Mi A2 ho an'i Espana dia mbola tsy fantatra. Fa raha dinihina ity famoahana ity, mety ho 300 euro. Noho izany dia ilaina ny mijery raha hanambara antsipiriany bebe kokoa momba ny fandefasana azy eo amin'ny tsena ireo herinandro ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Nanivana ny vidiny sy ny daty famotsorana ny Xiaomi Mi A2
Ny Moto C2 no finday Motorola voalohany miaraka amin'ny Android Go